Nrị elu nke Ahịa Ahịa, na Uru Ndị Ahịa | Martech Zone
Ugbu a ndị ahịa nwere ike ịzụrụ ihe ntanetị oge ọ bụla, na ebe ọ bụla nwere mgbaama mkpanaka ma ọ bụ wifi, ụlọ ọrụ ndị na-eme nke ọma na-achọkarị nyiwe mkpanaka ha iji gboo mkpa ndị ahịa ha. Naanị afọ ole na ole gara aga, ndị na-ere ahịa na-amalite iche na ịre ahịa email bụ ụzọ na-anwụ anwụ, mana ọganihu na-adịbeghị anya M-azụmahịa na-egosiputa ihe di iche.
N'ezie, maka $ 1 ọ bụla etinyere na ire ahịa email, nkezi nloghachi bụ $ 44.25, na pacenti iri ise nke ihe niile pụrụ iche meghere maka saịtị mkpọsa na-eme na smartphones na mbadamba. Ndị na-ere ahịa ekwentị na-etinye 48% nke oge ha na saịtị e-commerce, yana 1 na 10 dollar e-commerce ejiri site na ama ma ọ bụ mbadamba. Na 2013, ụlọ ọrụ ndị na-agbanye nnukwu ego site na ahịa mkpanaka bụ Apple, Amazon, QVC, Walmart, na Groupon Goods, na-egosi na ahịa email nwere ike ịmaliteghachi ma ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa na-enye ahụmịhe mkpanaka pụrụ iche.
Ntụaka visualizes dị nnọọ ka ike mobile ahịa aghọwo, na infographic n'okpuru.
Tags: ecommerceinfographicmarketingMobile na Mbadamba ụrọngwa ahia